Vokatry ny oram-be tany Ibity : olona valo mianaka indray maty nilatsaham-potaka | NewsMada
Vokatry ny oram-be tany Ibity : olona valo mianaka indray maty nilatsaham-potaka
Tsy ny valan’aretina pesta no nandripaka tao amin’ny distrikan’Antsirabe II fa ny varatra mahery vaika, vokatry ny oram-be nikija tany an-toerana. Valo mianaka no indray maty tsy tra-drano, vokatr’izany, ny alakamisy tolakandro teo, tao amin’ny fokontany Alatsinain’Ibity.
Tao amina trano iray vaovao an-dalam-pamitana azy ireo olona valo mianaka ireo no nilatsaham-potaka, tany amin’ny fokontany Ampeka, kaominina ambanivohitra Alatsinain’Ibity, Antsirabe II, ny harivan’ny alakamisy teo tokony ho tamin’ny 5 ora. Nifofofo ny rivotra ary narahina oram-baratra izany. Olona sivy izy ireo no tao amin’ilay trano ka mpanamboatra ny efatra raha tompony kosa ireo dimy mianaka.
Nirefotra mafy ny varatra ka niantefa tany amin’ireo olona ireo. Iray tamin’izy ireo sisa velona fa ny valo, maty teo no ho eo.
Anisan’izany izy dimy mianaka izay nahitana zaza miisa telo ka vao roa volana ny zandriny indrindra; ny zokiny vao roa taona ary ny iray hafa, tokony ho eo amin’ny 6 taona eo. Namoy ny ainy ihany koa izy mivady ray aman-drenin’ireo zaza ireo. Maty tsy tra-drano ihany koa ny mpanao trano telo lahy.
May avokoa izy rehetra ireo tamin’ity varatra nilatsaka ity ka ny sasany teny amin’ny faritry ny lohany, ny hafa tamin’ny tratrany sy ny kibony. Ilay zaza vao roa volana kosa, may teo am-pofoan-dreniny ny vatany rehetra.
Nitantara ilay iray sisa velona fa nanevokevoka sy nafana be ny andro tamin’io fotoana io. “Faly izahay fa hilatsaka ny orana ka mba hangatsiatsiaka indray eo am-panaovana ny trano”, hoy ilay mpandrafitra. Mbola niasa mandalotra ny anatiny sy mametraka ny valin-drihana ary ny loko sisa tsy vita tamin’ilay trano. “Nandeha nivoaka ny trano handraoka havandra niparitaka teny an-tokotany aho mba hanalana hetaheta nefa nirefotra tahaka ireny baomba ireny ny varatra. Taitra aho ary somary nianjera mihitsy ary nahita fa nisy afo nivoaka avy ao amin’ilay trano”, hoy ny fitantarana. “Niditra nijery ny zava-misy aho ka akory ny hatairako raha nahita ireo tompon-trano sy ny mpiara-miasa efa nivalampatra amin’ny tany”, hoy ny fanamafisana. Nianso vonjy ity mpandrafitra taorian’izay ka nifarimbona namonjy ireo olona ny mpiray tanana. Nentina teny amin’ny toeram-pitsaboana ihany mba hialana nenina izy ireo, saingy efa tsy nisy azo natao intsony.
Omaly maraina, efa tonga nijery ny zava-misy ny ben’ny Tanànan’Ibity sy i Vinaninkarena ary ny antoandro kosa ny lehiben’ny Faritra sy ny mpiara-miasa aminy no tonga nampahery ny fianakaviana niharan-doza.
Loza tsy mampilaza ny loza toy izao, na misy aza ny mihevitra fa tolak’olona ny filatsaham-baratra mahafaty olona toy ireny indraindray. Fotoam-pahavaratra, fotoan’ny varatra izao. Misy ihany ny fepetra azon’ny olona itandremana rehefa mirotsaka ny oram-baratra toy ny tsy fandefasana fitaovana misy herinaratra, mialoka ambany hazo sns.
Fitandremana ihany anefa izany fa manampy trotraka izany ny fikaran’ny rano amin’ny faritra maro eto an-dRenivohitra rehefa milatsaka ny orana. Ity fiakaran’ny rano ity izay azon’ny rehetra hitandremana mba tsy hahafaty ihany koa. Mitaky ny fandraisan’ny manam-pahefana andraikitra koa anefa amin’ny fikaroham-bahaolana amin’ny fivalanan’ny rano. Ny olona koa anefa, manana adidy amin’ny tsy fanariana fako etsy sy eroa izay manentsina ny lakandrano, sns. Mandrora mitsilany ihany ny sasany, ny fotodrafitrasa mifanaraka amin’izany anefa, tsy misy ka miakatra be ny rano.